DHAGEYSO: Abwaan Soomaaliyeed oo Gabay ku cabiray Xumaanta uu leeyahay Nidaamka 4.5 ee ay doonayaan dhinacyada Koonfurta Soomaaliya. - BAARGAAL.NET
DHAGEYSO: Abwaan Soomaaliyeed oo Gabay ku cabiray Xumaanta uu leeyahay Nidaamka 4.5 ee ay doonayaan dhinacyada Koonfurta Soomaaliya.
✔ Admin on December 15, 2015
Mid kamid ah Abwaanada Soomaaliyeed ayaa si weyn uga hor yimid Nidaamka 4.5-ka, waxaana uu sheegay in aysan aqbaleyn wax Nidaam Qabaa’il ah, wuxuuna si gooni Gabay uu tiriyey ugu cabiray sida Nidaamkan u yahay mid guud ahaanba aan dan u aheyn Shacabka Soomaaliyeed.
Nabadoon Cabdulaahi Maxamed Jibriil oo kamid ah waxgaradka Puntland ayaa hab suugaaneed ku cabiray in uusan fiicnayn nidaamka 4.5 loona baahanayahay in ummada soomaaliyeed ka gudubto oo ay qaadato nidaamka deegaanka.
Cabdulaahi Maxamed Jibriil ayaa ugu baaqay wafdiga dowladda Puntland ee uu hogaaminayo Madaxweynaha Puntland inay talada dalka kula soo noqdaan hadii lagu cadaadiyo in ogolaadaan nidaamka 4.5 si looga wada tashada.